TOP NEWS : NabadSugida Soomaaliya oo Muqdisho ku qabatay Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS : NabadSugida Soomaaliya oo Muqdisho ku qabatay Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay
by admin 29th March 2016 023
Ciidamada Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka ayaa saakay Howlgal qorsheysnaa ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa waxa ay kusoo qabteen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Gaarrigaay qabteen Ciidamada Nabad sugida ayaa noociisu Waxa uu yahay kaarib.
Howlgalka ayaa waxa uu dhacay Subaxnimadii hore ee saaka waxaana uu ka dhacay Nawaaxiga Madaxtooyadii hore C/qaasim Salaad Xasan ee Degmada hodan
Gaari waxaa la sheegay in ay ku xirnaayen waxyaabaha qarxa oo aad u badan iyo qoryo fudud Nisa ayaana sheegtay in gaarigaan loogu talagalay in Howlgal qorsheysan lagu fuliyo Balse Shacabka iyo Hey’adda Nabad Sugidda oo is kaashanaya ayaa ka hortagay in gaarigaan loo adeegsado qarax ka dhaca gudaha magalada Muqdisho.
Macluumaadka gaarigan waxaa hay’ada NISA u soo gudbiyay Dad shacab ah oo ku dhaqan Dagmadaasi is la markaasna la sooxiriiyay Ciidanka Amaanka kadib markii ay ogaadeen inuu Jiro Gaari ay Ka Buuxan Walxa Qarxa.
Ugu Dambeyn Hey’adda sirdoonka iyo Nabad Sugidda qaranka ayaa xustay in goordhaw oo maanta ah ay saxaafada usoo bandhigi doonan gaariga laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa ee saakay ay kusoo qabteen qeybo ka mid ah degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Madaxweynaha Jubbaland oo soo xiray Barlamanka Jubbaland
TOP NEWS: Dhageyso: Axmad madoobe Muxuu ka yiri Sababta daahineysa in uu soo Magacaabo Golahiisa Wasiirada
Akhriso: Magacyada Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Galmudug oo Maanta ku Guuleestay Doorashada ka dhacday Cadaado
Tifaftiraha K24 22nd November 2016
Habraaca Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo lasoo saaray.
XOG Mas’uul sheegay in DF ay hubka isugu dhiibeyso Ciidamada